Madaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday Maamulka G/Mudug, magacaabayna Maamul cusub – SBC
Madaxweynaha Puntland oo xilkii ka qaaday Maamulka G/Mudug, magacaabayna Maamul cusub
Posted by editor on August 24, 2011 Comments
Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa maanta wareegto uu ka soo saaray madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe waxa uu xilkii kaga qaaday, Maamulkii gobolka Mudug Puntland, isagoona u magacaabay maamul cusub.
Wareegtada ka soo baxday madaxweyne Faroole ayaa Nambarkeedu aheyd 70, waxaana ku xusnaa in xilkaqaadistan ay ku timi ka dib markii loo baahday Maamul tayo leh oo uu yeesho Maamulka gobolka Mudug ee Puntland.
Wareegtada Madaxweynaha oo la soo gaarsiiyay xafiiska SBC International ee magaalada Garoowe ayaa u qorneyd sidan,
Madaxweynaha Puntland Markii uu arkay Dastuurka Puntland, Maruu arkay Xilgudasho la’aanta Maamulkii gobolka Mudug, Markuu tixgeliyay baahida Maamul ee ka jirta gobolka Mudug, Waxuu xeeriyay in xilkii laga qaaday Maxamuud C/raxmaan Cuuke Gudoomiyihii maamulka Gobolka mudug ee Puntland, waxaana maamulka degmada iyo gobolka loo magacaabay Saraakiishan.
Maamulka Cusub gobolka Mudug Puntland.
1 Maxamed Yuuruf Jaamac Gudoomiyaha gobolka Mudug
2 Farxaan Cali Xirsi Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee gobolka Mudug
3 Axmed Muuse Nuur Gudoomiye ku xigeenka 2aad ee Gobolka Mudug
Maamulka Degmada Gaalkacyo.
1 Siciid Cabdi Faarax Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo
2 Daahir Maxamuud Muuse Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee Degmada
waxaana ku xisneyd in maamulka degmada Gaalkacyo magacaabistoodu tahay mid kumeel gaar ah.
Wareegtadani ayaa waxaa ay dhaqeyn galeysaa marka uu madaxweyne Faroole saxiiso waanu sixiixay.